Ogologo oge ole ka mkpuru osisi na-ewe mgbọrọgwụ? – Wikipedikia Encyclopedia?
Ogologo oge ole ka osisi cuttings iri mgbọrọgwụ?
N'otu aka ahụ, Ị nwere ike iri cuttings ọ bụla osisi?
Garden osisi nwere ike a ga-agbasa n'ọtụtụ ụzọ. Ma otu nke kacha ụzọ bụ ewere azuokokoosisi ibe, na-etinye ha na mmiri ma ọ bụ na-eto eto ruo mgbe ha tolitere mgbọrọgwụ, na mgbe ahụ akuku gbanye mgbọrọgwụ ibe n'ime ite ma ọ bụ n'ala.
Ọzọkwa, ị nwere ike iwepụ hydrangea? Were ịkpụ site na alaka nke osisi hydrangea shrub ihe dị ka 5-6 "ogologo. Ọtụtụ ndị ọkachamara na-ekwu na ịcha ga- na-arụ ọrụ kacha mma ma ọ bụrụ na e si alaka ụlọ ọrụ na-adịghị ifuru afọ a. Tinye ibe na mgbọrọgwụ hormone (nke a bụ nhọrọ kpamkpam) ma tinye n'ime vermiculite dị mmiri mmiri, ájá na-adịghị mma ma ọ bụ ihe ndị ọzọ na-adịghị mma.
38 Ajụjụ na Azịza Yiri nke Achọtara?
Kedu ihe ị na-ekwesịghị ibelata n'oge oyi?
Kedu osisi nwere ike itolite site na cuttings?
Kedu mmiri ole osisi anwụrụ chọrọ?
Kedu mgbe m ga-ewepụ Cotinus?
Kedu ka m ga-esi mara ma cuttings m gbanye mgbọrọgwụ?
Kedu mgbe ekwesịrị ịkpụcha maple ndị Japan?
Kedu ka m ga-esi gbutu osisi?
Osisi anwụrụ ọkụ na-atụfu akwụkwọ ha?
Kedu ka esi atụgharị osisi anwụrụ ọkụ?
Enwere ike igbutu camellias ike?
Kedu otu ị ga-esi megharịa oroma mock?
Kedu ka esi akụ ohia anwụrụ ọkụ na-acha odo odo?
Osisi anwụrụ ọkụ ọ na-emetọghị ihe?
Olee otú nnukwu osisi anwụrụ ọkụ si enweta?
Enwere ike ịkwachaa Berberis?
Kedu ka osisi anwụrụ ọkụ si eto ngwa ngwa?
Ebee ka ị na-egbutu mgbe ị na-akwacha?
Kedu ka esi esi fatịlaịza osisi anwụrụ?
Gịnị bụ ike kwachaa?
Ego ole anyanwụ ka ohia anwụrụ ọkụ chọrọ?
Kedu otu esi elekọta osisi anwụrụ ọkụ?
Ị nwere ike ibelata osisi anwụrụ ọkụ n'oge okpomọkụ?
Enwere m ike ịkwachaa osisi n'oge mgbụsị akwụkwọ?
Olee otú nnukwu ọhịa anwụrụ ọkụ si enweta?
Ọ nwere ike ịkpụcha Philadelphus siri ike?
Gịnị bụ mweghachi kwachaa?
Ị nwere ike ihichapụ ohia anwụrụ ọkụ?
Kedu ngwa ngwa ohia anwụrụ ọkụ na-eto?
Kedu ihe kpatara ohia anwụrụ ọkụ na-acha odo odo m ji agba ndụ ndụ?
Anyị na-ezere oyi kwachaa nke mmiri-okooko osisi n'ihi na ha na-ama nwere ha buds (na ga-aghọ blooms) na na ebipụ ha pụọ ​​pụtara efu na a okooko oge. Ma, ọtụtụ osisi na osisi kwesịrị ekwesị maka mbubreyo oyi kwachaa tinyere osisi apụl, urukurubụba ọhịa, osisi tulip, na viburnum.
Ọkara mfri eke/Semi-Hardwood Mpekere
Osisi ndị dị ka camellia na honeysuckle na-agbanyekarị nke ọma site na ọkara-chara ibe. Azalea: Ndị a bụ otu n'ime osisi okooko osisi kacha ewu ewu. Camellia: A maara osisi a maka okooko osisi buru ibu ma na-egbuke egbuke. Honeysuckle: Nke a bụ osisi ịchọ mma na-ewu ewu.
N'ikpeazụ, 2 galọn nke mmiri ụtụtụ ọ bụla ezuola; Otú ọ dị, nke a dịgasị iche dabere n'otú ala si agbapụta ngwa ngwa. N'ime izu mbụ, lelee ala kwa ụtụtụ tupu ịgbara mmiri iji chọpụta ma galọn abụọ ezuola.
Cotinus kwesịrị be edozi n'oge oyi ma ọ bụ mmalite oge opupu ihe ubi mgbe ọ ka na-ehi ụra na debe usoro nke shrub na-ele anya nke ọma. Mgbe ị na-ahọrọ a Cotinus na osisi n'ubi ọ dị mma na buru n'uche na Cotinus nwere ike eto nnọọ nnukwu.
Tupu nke ahụ, epupụta ị hapụrụ ga-adị mma na-apụtachaghị ìhè anyanwụ. Ị ga mara osisi agbanyewo ma ọ bụrụ mgbe otu ọnwa ma ọ bụ abụọ ọ ka dị ndụ, epupụta adịghị ada, ọhụụ ọhụrụ pụtakwara. Mgbe izu ole na ole gasịrị, ị nwere ike jiri nwayọ dọta na nkwụsị ahụ if ọ na-arapara n'ahụ, ị ​​dịkwa mma.
Lynn na-ahọrọ kwaa Japanese maples na ngwụsị oge ọkọchị, mana ndị mbido ga-adị mfe prun mgbe osisi na-enweghị akwụkwọ ma na-ehi ụra na mbubreyo ọdịda na midwinter. Ìhè kwachaa enwere ike ime oge obula ma e wepu oge opupu ihe ubi, mgbe sap na ebili. Ihe mgbaru ọsọ nke kwachaa bu iji gbaa osisi ume ka o na-eto eto.
Esi mgbọrọgwụ Softwood Cuttings
Bee otu nke softwood pụọ na osisi nke ọ dịkarịa ala 6 ″ ogologo, ma ọ bụghị karịa 12 sentimita asatọ.
Wepu okooko osisi ma obu nkpuru obula na igbutu ya.
Ewepụtụ azuokokoosisi ka n'okpuru ebe ala ọtụtụ akwukwo osobo azuokokoosisi.
Na nke ọ bụla nke epupụta na azuokokoosisi, bepụ ọkara nke akwukwo.
Ná ngwụsị oge oyi ma ọ bụ mmalite oge opupu ihe ubi, a ga-egbutu osisi ndị a n'ụzọ niile nke ala. Ezigbo ụdị hydrangea ga-emepụta okooko osisi buru ibu karị ma ọ bụrụ na a ga-egbusi ya ike dị ka nke a kwa afọ, mana ọtụtụ ndị na-elekọta ubi na-ahọrọ obere ifuru na stems.
Otu esi atụgharị osisi anwụrụ ọkụ
Mgbọrọgwụ-prune site n'itinye spade ma ọ bụ shọvel n'ime ala, na-aga n'akụkụ osisi ahụ.
Kwadebe ebe ịchọrọ ịkwanye osisi anwụrụ ọkụ.
Gwuo osisi anwụrụ ọkụ, na-edebe bọọlụ mgbọrọgwụ dị ka o kwere mee.
Kpatụ ala n'ebe iji wepụ akpa ikuku.
Mgbe okooko oge gwụchara, ebipụ pụọ na alaka ọ bụla na-apụta ma na-adịghị mma. Ọ bụrụ na gị Camellia ohia adighi aka, atula egwu iweputa ndi gbuturu ma banye ike. Nke gbara ọkpụrụkpụ kwachaa uche mee ka osisi dị ọhụrụ maka afọ ndị na-abịa.
Kwachaa a oroma emo afọ ọ bụla mgbe ọ gbasasịrị ga-eme ka osisi ahụ dị mma ma mara mma. Mgbe ịla azụ oroma emo Osisi, belata alaka ndị nọrọ oge ntoju banyere 1/3 ruo 2/3 ogologo ha. Ọzọkwa, bepụsịa ochie ma ọ bụ osisi nwụrụ anwụ laghachi n'ala.
Otu esi akụ osisi anwụrụ ọkụ
Họrọ ebe a na-akụ ihe ọkụkụ nke nwere anwụ zuru oke na ndò na-adịghị anya na ala nke ọma nke nwere pH n'etiti 3.7 na 6.8.
Gwuo oghere ihe ọkụkụ ugboro abụọ n'obosara dị ka bọọlụ mgbọrọgwụ osisi anwụrụ ọkụ na nke miri emi dị ka bọọlụ mgbọrọgwụ dị ogologo, nke mere na elu bọọlụ mgbọrọgwụ na-agbanye na ọkwa ala.
Osisi anwụrụ ọkụ sitere na mpaghara ndịda Europe na Central China. Ọ bụrụ na a na-akpachabeghị ya, ọ na-eto dị ka ite ite, nke nwere ọtụtụ osisi osisi or nnukwu shrub, na-erukarị elu nke 10 ruo 15 feet. Ka smoketree na-eto, alaka ya na-agbasa, na-enye ihe osisi ọdịdị mepere emepe, sara mbara.
Hardy kwachaa ịma mma ụlọ
Ọ bụrụ na ịchọrọ do ụfọdụ siri ike kwachaa mgbe ahụ ekwesịrị ime nke a n'oge mbido ọkọchị mgbe okooko gasịrị. Ha nwere ike be edozi azụ ike na -enweghị nsogbu ọ bụla na kwachaa n'oge ga- hụ na ha nwere oge iji mepụta ọtụtụ uto ọhụrụ n'oge ọkọchị nke ga- ifuru n'afọ na -esote na oge opupu ihe ubi.
Ihe na -acha odo odo osisi anwụrụ ọkụ na -eto dị mma ngwa ngwa. Arbor Day Foundation na -akọwa nke a dị ka uto kwụ ọtọ nke sentimita 13 ruo 24 kwa afọ.
Maka ezigbo mma ịkpụ, mgbe enwere ike, ịkpụ na nwa osisi ma ọ bụ offshoot nke na-abụghị naanị ahụike ma na-atụ aka na ntụziaka ịchọrọ ka uto ga-eme n'ọdịnihu, na-emekarị ka ọ ghara ịdị n'etiti osisi ahụ. Ọ na-adịkarị ọnụ ahịa ọnwụ azụ n'ihu -kwachaa gbanyụọ osisi ọzọ - iji nweta ọnọdụ a, nke na-akwado mmepe nke usoro dị mma.
Iji ifatilaiza anwụrụ ọkụ, tinye ½ paụnd nke 18-6-2 fatịlaịza ọ bụla 50 square ụkwụ nke ubi. Gbasaa fatịlaịza gburugburu ohia, 6 ruo 12 inch dịpụrụ adịpụ site na ogwe osisi ahụ, na mmiri ma gbanye ya na mmiri mgbe etinyere ya.
Pkwacha siri ike bụ a kwachaa Usoro na-ewepụ nnọọ osisi. Ị kwesịrị prun n'oge oyi mgbe osisi ahụ na-ehi ụra ma bee azụ na buds atọ na onye ọ bụla na-ebu spur, alaka dị n'akụkụ nke na-eto eto na alaka ma ọ bụ isi alaka.
Kedu ka ị ga-esi pịchaa ahịhịa tozuru etozu?
Jiri mkpịsị osisi dị nkọ.
Zere ịkpụcha na oge okpomọkụ ma ọ bụ na mbubreyo ọdịda.
Na-ewepụ alaka mgbe niile na-agafe ma ọ bụ na-emebi ma ọ bụ na-arịa ọrịa.
Mee ezumike ma nyochaa ọrụ gị n'akụkụ niile iji jide n'aka na ị na-arụ ọrụ ọ bụla ma na -emepụta ọdịdị dị mma.
Prun a anwụrụ anwụrụ n'oge oyi ma ọ bụrụ na ị na-eto ya maka akwụkwọ ya. Agbanyeghị, ma ọ bụrụ na ị na-eto ya maka anwụrụ ọkụ ya, ihe ngosi feathery mgbe okooko gasịrị, prun na mmalite- ruo etiti-okpomọkụ mgbe ha na-na zuru ngosi otú ị na-eme ebipụghị nwa afọ ọzọ.
Ekwesịrị ịsacha osisi na-eto eto mmiri nke ukwuu na mgbe niile, mana ozugbo emebere ya. anwụrụ ọkụ ohia nwere ezigbo iguzogide unwu. Jiri ibe osisi ma ọ bụ ogbugbo kpuchie ala osisi ndị ahụ iji mee ka ahihia pụọ ​​na ooh ala.
Ịkwụsị osisi anwụrụ ọkụ nwere ike a ga-eme n'oge oyi ma ọ bụ n'oge opupu ihe ubi. Summer okooko osisi dị ka osisi anwụrụ ọ dị mkpa ka a kwachaa tupu ifuru ifuru egosila. Iwu maka kwachaa osisi okooko osisi deciduous na-ekwu na if ọ okooko osisi mgbe June 1, dị ka anwụrụ anwụrụ, ị mkpa prun na mmalite oge opupu ihe ubi.
Osisi anwụrụ ọkụ na-atụfu akwụkwọ ha n'oge oyi ma n'oge opupu ihe ubi ha uto ọhụrụ na ụyọkọ okooko osisi na-adọta mmasị. Enwere ike igbutu ha n'oge oyi dị ka osisi shrub ọ bụla. Ihe si na ya pụta bụ uto na-eto eto n'oge opupu ihe ubi, na-eme ka osisi ahụ dị mita 6 ma ọ bụ 8.
Kwachaa osisi n'oge mgbụsị akwụkwọ
Mgbe oge okpomọkụ gachara n'ike n'ike, ọ dị mma inye gị osisi ọkụ prun na n'oge mgbụsị akwụkwọ idowe ha n'ụdị. Ozugbo deciduous osisi hapụ ha epupụta, ọ dị mfe ịhụ osisi 'n'ozuzu udi na-ekpebi ihe kwesịrị ka ebipụ azụ.
You'll ga-ahụ anwụrụ anwụrụ kọwara na katalọgụ na nrụtụ aka n'ubi ka ha abụọ a osisi na osisi. Hapụ na ọchịchọ ebumpụta ụwa ya, ọ ga-eto banye n'osisi. Ụdị nke Eurasia, Cotinus coggygria, ruru elu nke 15 ụkwụ; C. obovatus, onye si na ndịda ọwụwa anyanwụ, toro ogologo, na-eru 25 ruo 30 ụkwụ.
Pkwacha siri ike na-akpalikarị uto ọhụrụ siri ike, ma ọ dị mwute ikwu ga- na-ebute ọnwụ nke ifuru otu afọ ma ọ bụ abụọ maka ụfọdụ osisi (karịsịa ndị, dị ka Philadelphus na Camellia, ifuru ahụ na uto oge gara aga).
Rejuvenation kwachaa bụ mwepụ nke ochie, nke tojuru etoro ka osisi ahụ wee nwee ike itolite alaka ọhụrụ, gbasiri ike. Osisi na-achọ mweghachi nwere ike isi ike edozi or edozi nke nta nke nta. Siri ike kwachaa na-agụnye igbutu shrub ahụ ruo elu nke 6 ruo 12 sentimita asatọ n'elu ala ma kwe ka ọ laghachi azụ.
gburugburu ebe obibi, ebe obibi na ubi, landscaping, sayensị
Ga directv nweta nkwalite m nnata na free?